E ji mara: Single-ojiji, enweghị ike na-re-eji. Agịga na-echebekwa tupu mgbe eji kpamkpam. Nwoke ịga ụlọ ọgwụ: igba ogwu na site gamma-Ray ala: Easy iji tupu kwajuru na nsogbu ọrụ ngwaọrụ. Elu àgwà tri0bebel agịga na elu-ọsọ penetration. Multiple nhọrọ na-enye a dịgasị iche iche ...
Single-ojiji, enweghị ike na-re-eji.
Agịga na-echebekwa tupu mgbe eji kpamkpam.
Nwoke ịga ụlọ ọgwụ: igba ogwu na site gamma-Ray
Easy iji tupu loaded na nsogbu ọrụ ngwaọrụ.
Elu àgwà tri0bebel agịga na elu-ọsọ penetration.
Multiple nhọrọ na-enye a dịgasị iche iche nke fere fere nha na penetration
ogbu izute kasị capillary ọbara requirements.Healthecare ọrụ
mgbe niile na-eche ihu nwere agịga-mkpisi unan ụbọchị ọ bụla na-elekọta
maka paitents, gụnyere n'ebe ọbara-mụrụ pathogens suc dị ka AIDS
na ọbara-mụrụ pathogens, dị ka AIDS na Hepatities nje.
Anyị nchekwa Lancet e desighed iji gbochie n'elu-e kwuru ọnọdụ.
Unu na-eji Lancet ma ọ bụrụ na-echebe okpu ka beend wepụrụ na mbụ.
Agba: Orange, Rose red, Green, Yellow
Mbukota: 100pcs / igbe, 2000pcs / ctn
Sinomed bụ otu n'ime ndị na-eduga China Blood Lancet Nsukka, anyị factory bụ ike ịmị OA asambodo nchekwa Lancet pa. Mmadụ Bịa na n'ùkwù ọnụ ala ma na elu-edu ngwaahịa anyị.
Hot Tags: nchekwa Lancet pa, China, Nsukka, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, N'ogbe, ọnụ ala, elu-edu, OA asambodo
Previous: lancets na ule ibe Safety Lancet BA
Osote: Igwe anaghị agba nchara Lancet
ọbara glucose Lancet
Blood ighikota-Off Lancet
Disposable Lancet ndudu
Disposable igwe anaghị agba nchara Blood Lancet
Lancet na Plastic Cover
Pressure ọrụ Blood Lancet
Single Iji Blood Lancet
igwe anaghị agba nchara Blood Lancet
Igwe anaghị agba nchara Lancet
akpali mmasị Blood Lancet
ighikota Blood Lancet
tourniquet, TPE ihe
BD ọbara collection agịga Blood Collection agịga
otu were disposable lancets Blood Lancet na ...
lancets na ule ibe Safety Lancet BA
urukurubụba agịga ọbara Olee Butterfly agịga